The Myawady Daily: သွင်းကုန် အစားထိုးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဟူသော မူလရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အရေးကြီး၊ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးရန်၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလည်း အားပေး ရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
ခေါင်းချွေးထွက်ရောဂါ ကြည်လွင်မြင့် (မုဒြာ) အနောက်တိုင်း ဆေးပညာ အယူအဆတွင် အသက် ၄ဝ ကျော်သူတို့မှာ အဖြစ်နှင့်အပျက် တွင် Cells ခေါ် ...
The greetings extended by Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at the second session of the Union Peace Conference-21st Century Panglong
Nay Pyi Taw May 24 Officials of the State, personnel of the respective armed ethnic groups and local and foreign guests attending...
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၆) ၊ အမှတ် (၁) Download Links MediaFire Scribd 1-11-2017 The Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scrib...
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅)၊ အမှတ် (၁၂) Download Links MediaFire Scribd 25 10 2017 Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd ...
မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၆၅) ၊ အမှတ် (၁၁) Download Links MediaFire Scribd 1892017 Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd ...
Tourist Maps of Myanmar ( TMM-32) အခမဲ့ ထပ်မံဖြန့်ချိ
ရန်ကုန် ၊ ၉-၇-၂၀၁၃ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွားလာရေး ၀န်ကြီးဌာန ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် Design Printing Service Co., Ltd ( D.P.S ) သည် မြန်မာန...
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ - ၁၃
စက်ရုံများ၏ စက်များစွမ်းအားပြည့်လည်ပတ်ပြီး ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် ပေးကြရန်လိုကြောင်း၊ ဈေးကွက်ရရှိရန် အတွက် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ရန် လိုကြောင်း၊ ဈေးကွက် ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင်လည်း ပစ္စည်းချင်းတူပါက ဈေးနှုန်းသက်သာရမည်၊ ဈေးနှုန်း ချင်းတူပါက ပစ္စည်းပိုကောင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် စက်ရုံများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါ စက်ရုံအချို့ကို တပ်မတော်မှ လွှဲပြောင်း ရယူ လည်ပတ် လျက်ရှိပြီး အချို့စက်ရုံများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ စက်ရုံများ အားလုံးသည် သွင်းကုန် အစားထိုးနိုင်ရန်နှင့် ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဟူသော မူလရည်မှန်းချက်အတိုင်း ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးရန်၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပြည်တွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလည်း အားပေးရန်နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က တပ်မတော်စက်ရုံများသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးစဉ် မှာကြား ရာ၌ ထည့်သွင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မျိုးဇော်သိန်းနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်ပုံ တို့လိုက်ပါပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော် ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ(သမိုင်း) သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဦးစွာ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စက်ရုံမှူးက စက်ရုံသမိုင်းအကျဉ်း၊ ၀န်ထမ်းများ ခန့်အပ်ထားရှိမှု၊ ဆေးဂွမ်းလိပ်၊ တီရှပ်၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါများနှင့် ပိတ်ညိုများ ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေအနေများ၊ ၀န်ထမ်း များ သက်သာချောင်ချိရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ရှင်းလင်း တင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မိမိတို့စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း များအား တပ်မတော်အတွက်သာမက ပြင်ပသို့ ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ပြည်ပသွင်းကုန်များ ၀ယ်ယူ ရခြင်းအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ လျှော့ချနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေကုန်ကျမှုကို လျော့ကျ စေမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ထုတ်ကုန်များ အားအရည်အသွေးပြည့်မီပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးရန် လိုကြောင်း ပြောကြားပြီး တပ်ဆင်ထားသည့် စက်များအား စွမ်းအားပြည့်လည်ပတ် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ ထုတ်ကုန်များ ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်ပြီး အရည်အသွေး အာမခံနိုင်သည်အထိ ဆောင်ရွက်၍ ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ၀န်ထမ်းများ၏ သက်သာ ချောင်ချိရေး အတွက် အမြဲမပြတ် ဆောင်ရွက် ပေးနေရန်တို့အား မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ် သော တပ်မတော်သုံး အ၀တ်အထည်များ၊ ဆေးဂွမ်းလိပ်များ၊ ပိတ်စများ၊ ပ၀ါရောင်စုံ၊ တီရှပ် ရောင်စုံနှင့် အိပ်ရာခင်း ရောင်စုံတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ စက်ရုံမှူးက ရှင်းလင်းပြသသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံအတွင်း ချည်ချောများ ထုတ်လုပ်နေမှုနှင့် ပိတ်စများ အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေအနေများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြသည်။ ၎င်းနောက် စက်ရုံမော်တော်ယာဉ်ဌာန၊ ၀န်ထမ်းစားသောက်ဆိုင်နှင့် ၀န်ထမ်း သက်သာ ချောင်ချိရေး အရောင်းဆိုင်တို့အား လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် လိုအပ်သည်များ မှာကြားဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်မတော်သတ္တုပစ္စည်း စက်ရုံ (အုတ်ကျင်း)သို့ ရောက်ရှိကြရာ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် စက်ရုံမှူးက တပ်မတော်သုံး ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေမှုနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုအား လျှော့ချနိုင်သော ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက် ဖြစ်သည့် ဈေးကွက်ဝင် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများအား ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ စက်ရုံရှိ စက်များ စွမ်းအားပြည့် လည်ပတ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၀န်ထမ်းများ သက်သာ ချောင်ချိရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် လိုအပ်သည်များအား မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံအတွင်း တပ်မတော် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နေမှုအခြေ အနေများအား လိုက်လံ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ စက်ရုံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများ အပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည်များ မှာကြားဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးပြီး စက်ရုံဝန်ထမ်းများ အတွက် ချီးမြှင့်ငွေများ ပေးအပ်သည်။
အလားတူ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပိုရေး ရှင်း၊ တာယာစက်ရုံ(ရွာမ)သို့ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် စက်ရုံမှူးက စက်ရုံ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် တာယာများ ထုတ်လုပ်၍ ပြည်တွင်း ဈေးကွက် သို့ဖြန့်ချိနေမှုနှင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
ရှင်းလင်း တင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စက်ရုံမှထုတ် လုပ်သောတာယာ များအား သွင်းကုန် အစားထိုးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အရည်အသွေး ကောင်းမွန်မှု ရှိစေရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ရာဘာကုန်ကြမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား အရည်အသွေးပြည့်မီစွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ရန်၊ ပြည်ပချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်၍ ပြည်တွင်းဈေးကွက် သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများသို့လည်း အရည်အသွေး ပြည့်မီသည့် တာယာများ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ၍ နိုင်ငံခြား ၀င်ငွေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ စက်စွမ်းအားများ အပြည့်အ၀ အသုံးချ လည်ပတ်ရေးနှင့် ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်မှာကြားပြီး စက်ရုံဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် နေထိုင် စားသောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များအား စီမံဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တာယာစက်ရုံ (ရွာမ)မှ ထုတ် လုပ်သည့် ပြည်တွင်းသို့ ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည့် TRI STAR တာယာများနှင့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် TRI STAR တာယာများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ စက်ရုံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံအတွင်း TRI STAR တာယာများ ထုတ်လုပ်နေမှု အဆင့်ဆင့်အား လှည့် လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးရာ စက်ရုံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်း တင်ပြကြသည်။ ၎င်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စက်ရုံဝန်ထမ်းများအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများအား ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာစီးပွားရေး ကော်ပို ရေးရှင်း၊ အမှတ်(၃) သံမဏိစက်ရုံ(ရွာမ)သို့ ရောက်ရှိကြရာ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ စက်ရုံမှူးက စက်ရုံ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် Bolt , Nuts နှင့် Washers များ ထုတ်လုပ်၍ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချနေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ် သည်များမှာကြား ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် စက်ရုံအတွင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ Bolt , Nuts နှင့် Washers များ ထုတ်လုပ်နေမှု အခြေ အနေများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များ အပေါ်လိုအပ်သည် များမှာကြား ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ အမှတ် (၃) စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စခန်းသို့ ရောက်ရှိကြရာ ရှင်းလင်းဆောင်၌ တိုင်းမှူးက Cooling Pad စနစ်ဖြင့် Hydroponic မြေလွှာမဲ့ နည်းပညာသုံး စိုက်ပျိုးရေးခြံများဖြင့် စိုက်ပျိုးထားရှိမှု၊ Hyline မိဘမျိုး ဥစားကြက်များ မွေးမြူထားရှိမှု၊ DYL ၀က်များ မွေးမြူထားရှိမှု၊ ငါးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု၊ နို့စားနွားများ မွေးမြူထားရှိမှုများနှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စခန်းများမှ ထွက်ရှိ သည့် အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥနှင့် နွားနို့များအား တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များ ထံသက်သာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချ ပေးလျက်ရှိသကဲ့သို့ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များအား မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဌာဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူ များ ထံသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။
-ရှင်းလင်း တင်ပြမှုများအပေါ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပြည်သူများ၏ စားရေး လိုအပ် ချက်အတွက် တတ်နိုင်သည့်ဘက်က ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အနေဖြင့် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေး မှ ထွက်ကုန်များအား တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်များအတွက် သက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ ရာမှ ပိုလျှံသော အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များအား ပြည်သူသို့ ဈေးနှုန်း သက်သာစွာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် အာဟာရပြည့်ဝပြီး လူအများ နှစ်သက်စွာ စားသုံး ကြသည့် ငါးအမျိုးအစားများကို တိုးချဲ့မွေးမြူရန် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ငါးကန်အတွင်း ငါးများ မွေးမြူ ထားရှိမှုနှင့် မွေးမြူရေး ခြံအတွင်း DYL ၀က်များ မွေးမြူထားရှိမှု အခြေအနေများအား လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များ အပေါ် လိုအပ်သည်များ မှာကြားဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်